Izindaba - Inkampani yethu ibambe iqhaza embukisweni weShanghai International Adhesives and Sealing Exhibition
Inkampani yethu iqhaza Shanghai International Adhesives futhi Ukubekwa uphawu Exhibition
Inkampani yethu ibambe iqhaza eShanghai International Adhesives and Sealing Exhibition ebiseShanghai New International Expo Center ngoSepthemba 16-18, 2020.
Kunabakhangisi abaningi kulo mbukiso kanti umncintiswano unolaka. Le nkampani yaqasha cishe amamitha-skwele angama-40 ehholo lombukiso futhi yaletha imikhiqizo engu-4, okungukuthi umshini wokugcwalisa, umshini wokucindezela, isixubanisi samaplanethi, nomshini wokusabalalisa onamandla. Imishini yokugcwalisa esiyikhombisile ngalesi sikhathi yehlukile kuleyo yezinye izinkampani. Imishini yethu yokugcwalisa ihlukaniswe ngeyodwa-tube kanye ne-double-tube ones. Ukunemba kokugcwalisa kuphakeme kakhulu futhi kufanelekile kunamathele we-viscosity ehlukahlukene. Ezinye izinkampani zisebenzisa ukugcwaliswa kwemisila, inkampani yethu ithuthukise ubuchwepheshe obuyingqayizivele bokugcwalisa ikhanda, obugcwalisa endaweni yeglue. Lokhu kugwema ngempumelelo amabhamuza womoya omusha ngesikhathi senqubo yokugcwalisa. Usayizi webhubhu yomshini wokugcwalisa amashubhu ama-tube amabili ungalungiswa ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Kokubili ishubhu elilodwa neshubhu ephindwe kabili kugcwaliswa ngokuvundlile, okuxazulula inkinga yokuxubana komoya nokuchichima kokugcwaliswa okuqondile, futhi ukusebenza kulula kakhulu.
Ngemuva kwezinsuku ezintathu zombukiso, inkampani yethu ithole ama-oda ayi-12 futhi yafinyelela izinhloso zokubambisana nezinkampani ezingaphezu kuka-30. Thuthukisa ukubonakala kwenkampani ochungechungeni lwemboni ephezulu nengezansi, futhi ibeke isisekelo esiqinile sokuqhubeka kwenkampani.
Ngasikhathi sinye, inkampani yethu ihlale isebenzisa imali eningi ocwaningweni lobuchwepheshe nasekuthuthukisweni. Lo mbukiso uphinde waqinisa ukuzimisela kwenkampani yethu ocwaningweni lwezobuchwepheshe nentuthuko. Ngokuzayo, sizobhekana nemakethe futhi sisebenzise ubuchwepheshe njengesiqinisekiso sokuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu ngamanani entengo nokusebenza okulula, ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende akhuphukayo nawasezansi ngezenzo ezingokoqobo.